Ummadaha Caruurta Ah! (WQ: Prof Abdi Ali Jama) | Hangool News
Ummadaha Caruurta Ah! (WQ: Prof Abdi Ali Jama)
Wariye Mooge: Maanta Maxaad haysaa?
Isagii: waxan hayaa darsi ku saabsan tafsiirka taariikhda.
Caruuri waa ciil laga waynaaday ayay yidhaahdaan dadka waawayni; markay sidaa leeyihiin waxay ka hadlayaan garaadka iyo fikirka ilmaha yar ee aan wax badan ogayn ama garashadiisu kooban tahay; sidaas oo kale waxa ka dhigan ummadaha; qaarkood baa caruur ah!!!.
Ma u malaynaysaa in ummadaha horumarka sameeyay xagga cilmiga iyo fikirka ay inoo arkaan sidaas oo kale in aynu caruur oo kale nahay, gaar ahaan marka ay ina arkaan innaga oo la daaladhacayna dhismaha qaran iyo qaab fikirkeena la xidhiidha.
Waxan ku qoslaa dadka ku naalooda Somali baa isku soo noqonaysa ee haddana madax ka dhigta kuwa Siyad Barre u haysta geesi qaran oo laga gardaraa; anigu ma ahi kuwa gooni isu taagga Somaliland ku sababeeya waa nala xasuuqay; haa wuu jiraa xasuuqu; waana wax laga xumaado; ha yeeshee, Kaligii taliyihii Siyad Barre Somali badan oo kaleba wuu laayay!!!
Qaddiyada Somaliland halkan inoo dhig; iyadu waa gaar, oo dadkii iska laha ayaa go’aan ka gaadhaye, laakiin waxan la yaabbanahay sida Somalida kale ula heshiisay kuwa illaa immika aaminsan in Siyad Barre ahaa geesi laga gardaraa; waxa ka sii daran doodda ugu wayn ee ay cuskadaan waa danbiyadii dhacay Siyad Barre ka bacdi.
Caruureey ba’a, ma is weydiiyeen cidda sanduuqa sharka furtay?!!!; illaa maanta qof kasta oo lagu dilo carriga Somalida danbigiisu wuxu ku qoran yahay Siyad Barre iyo Taliskiisii ku gacan adaygay gacan-ku- haytna dalka, gaar ahaan Muqdisho illaa intii ay ka lumayeen maamulkii iyo kala danbyntii!!!
Waxan qabaa labadaa qolo way isla carruuroobeen; miyay dhici kartaa khaladkii burburka waddanka ee dhacay iyada oo aan cid la saarin in aad qaran dhisataan oo aad hore u socotaan; xaggeed ku aragteen waddan qaladka intaa le’egi ka dhacay oo aan danbigii cidi qiran ama aan cid loo xanbaarin oo aayar dib isugu soo noqday, oo noloshii hore u socotay?; car ii sheega Taariikhda qaran ama ummad sidaasi suuragal u noqotay?; I challenge you!!!
Taariikhda dhaw soo qaado Ruwanda; dee qaladka dadkii lahaa way qirteen oo way toobad keeneen; ka dibna waa la saamaxay; Jarmalkana Nazigii burburiyay dalka iyo dunidaba waxa la qirsan yahay in ay danbiilayaal ahaayeen; mana soo hor joogsan karaan dadka ee dhuumasho ayay ku jiraan illa immika wixii nooli; waar miyay suuragal tahay in Somali uu madax u noqdo nin sida Farmajo oo kale ah oo aaminsan in Siyad Barre geesi ahaa; waar malaha Role model baabu u yahay!!!!
Mustafe Cagjar wuu fahmay; waa in lala xisaabtamaa maamulkii Cabdi Iley; haddii kale mar kale ayay soo noqon doonaan; ka dibna qaladkii mid la mid ah ayaa mar kale dhici kara!!!!; ugu yaraan waa in ay qirtaan qaladkii ay sameeyeen, si loo saamaxo; waa in aanay madaxnimo soo doonan!!!!
Miyaanay ahayn Siyad Barre iyo ciddii taageersanayd fikirka ah in dalka xoog lagu haysto illaa intay Muqdisho oo caasimaddiii dalka ahayd gacantooda ku burburaysay, dalka inta kale iska dhaafoo; miyaanay ahayn dadkaasi in ay qirtaan in ay danbiilayaal ahaayeen; dadka waxa ka mid noqon kara dad reer Somaliland ah, waxa kow ka ah Ina Lax Was; kuma jiro ninkii ka tegay ama ka soo horjeestay taliska sida Ina Xaaji masalle iyo kuwa la mida ka ah; waxay u badan karaan cid gaar ah; ima qusayso; waxan rabaa in dadkii qaladkaa galay la caddeeyo, ugu yaraan, in ay gaf wayn Somali ka galeen, ama ay qirtaan wixii nooli; isla markaana qof u arka Siyad Barre inuu ahaa geesi aanu xukunka qaban ama soo hungurayn.
Waxa ka sii ciyaalsan kuwaa qaladka taariikhiga ah ku dhisaya qaranka Somalida ee koonfurta, kuwa Somaliland u dhasahay ee u tegay ama u hanqal taagaya Qaranka dhalnteedka lagu dhisay ee Muqdisho, taasoo mar kale lagu hoosaasinayo ummadda Soomaliyeed!!!!
Su’aasha laga faa’iidayo maqaalkan waxa weeye: maxaa diidaya in qaladkii oo kale mar kale lagu celiyo haddii aan loo aqoonsan Siyad Barre iyo taageerayaashiisii danbiilayaal taariikhi ah?!!!!
Cabdo: Fiqiga Tafsiirka Taariikhda Qaramada.